Manaova make-up hiverina hiasa | Bezzia
Fotoana hiverenana miasa izao ary tsy fantatrao ny fomba hametahana haingana makiazy mba hahafinaritra toa kely amin'ny ezaka kely? Izy io dia zavatra mampikaikaika ny olona maro, satria na dia manampy antsika hanana endrika tsara kokoa aza ny makiazy, ny fahadisoana sasany dia mety hahatonga taona maro hitombo tsy azo ihodivirana. Mitranga izany matetika rehefa mandeha amin'ny fotoana kely ianao fa tsy mifidy tsara ny loko na ny vokatra, ampiharinao amin'ny bravas ny zava-drehetra nefa tsy dia mijery fitaratra ianao.
Ny fanaovana makiazy mazava dia tsy voatery ho fototr'izany, fa mora ampiharina ary misy valiny tena tsara. Ny tanjona dia ny fampisehoana endrika miseho mamirapiratra kokoa, endrika mifoha ary manitsy ireo tsy fahalavorariana voajanahary kely amin'ny hoditry ny tarehy. Ny fahatratrarana azy dia tsy sarotra, na dia tsy maintsy ataonao aza fantaro tsara hoe iza ireo vokatra mety ka ny makiazinao miverina miasa sy mahazatra, dia mahavariana, haingana ary mora ny manatanteraka.
1 Maneho makiazy, haingana, mora ary misy vokatra tsara
1.1 Omano ny hoditra
1.2 Ny maso
1.3 Fikitika vitsivitsy an'ny fanasongadinana ho an'ny makiazy miharo
Maneho makiazy, haingana, mora ary misy vokatra tsara
Mbola mafana ka tsy mety na tsy ilaina ny manavesatra ny hoditra. Aza mampiasa fototra tena manarona fa mifidiana vokatra maivana kokoa hanitsiana ny tsy fitovizan'ny lokon'ny hoditra. HO AN'NY ny maso tokony hitady a makiazy izay mahatonga anao hiambina kokoa, ny fisokafana sy mamirapiratra tokoa. Tahaka ny fikasihan-jiro vitsivitsy dia hanampy anao hampiseho ny hoditrao mamirapiratra, toy ny hoe niverina avy nanao vakansy ianao!
Araho ireto dingana ireto mba hanaovana makiazy mazava tsara hiverenana any amin'ny birao miaraka amin'ny toe-tsaina rehetra.
Omano ny hoditra
Ny fomba tsara indrindra hanehoana ny hoditra tsara tarehy dia ny fanarahana fahazarana tsara amin'ny tarehy, andro aman'alina. Zava-poana ny fampiharana ny karazana makiazy isan-karazany raha tsy voakarakara tsara ny hoditra. Diovy tsara amin'ny maraina sy amin'ny alina ary atsofohy amin'ny vokatra manokana ho an'ny karazana hoditra, taona sy zavatra ilainao. HO AN'NY manarona mena, pimples ary hoditra hafa, araho ireto dingana ireto.
Ampiasao voalohany ny fanafenana ao anaty faribolana maizina. Miaraka amin'ny vokatra kely dia kely ary mampiasa ny tendron'ny rantsan-tànana, satria ny rantsan-tànana no manana tanjaka kely indrindra ary toy izany no ialanao manimba ity faritra marefo amin'ny tarehy ity. Asio fanafenana any amin'ireo faritra tianao ahitsy, amin'ny mony, vavorona na mena. Afaka mampiasa spaonjy makiazy ianao, fa amin'ny rantsantanana no ahafahanao mampiditra tsara ilay vokatra ao anaty hoditra noho ny hafanan'ny vatana.
Mampiasà BB Cream raha tsy amin'ny faritra stratejika: Ny crème miloko dia mety tsara na dia amin'ny tonon-koditra aza tsy misy akanjo be loatra. Tsy ilaina ny mampihatra ny tarehy manontolo, any amin'ireo faritra misy tsy fahalavorariana ihany.
Vovoka amin'ny masoandro: Miaraka amin'ny borosy matevina be sy vovoka miaraka amina volo fotsy mba ahazoana feo mitovy amin'ny taratry ny masoandro. AMPIHARO vokatra kely dia kely ihany amin'ny faritra stratejika.
Ny ampahany lehibe indrindra amin'ny tarehy, ilay mamaritra ny toetranao. Ho an'ny makiazy haingana hiverenana miasa dia tsy mila manao asa be ianao. Mila mametraka aloka amin'ny tonon-tany fotsiny ianao, afaka mampiasa vovo-masoandro aza. Apetaho amin'ny borosy mifangaro ao amin'ny hodi-maso iray manontolo ary miasà amin'ny tsipika fehy. Ny mascara malala-tanana, miasa tsara, no hampisy ny tsy fitoviana. Ary hamita, soromy ny volomaso ary apetaho gel miloko mba hamaritana azy ireo.
Fikitika vitsivitsy an'ny fanasongadinana ho an'ny makiazy miharo
Tonga teo amin'ny fiainantsika ilay mpanazava mba hitondra hazavana sy fifaliana ho an'ny makiazy. Iray amin'ireo vokatra makiazy tian'ireo mpanakanto makiazy sy mpankafy makiazy rehetra. Tandremo anefa, ny fihoaram-pefy dia mety hanimba makiazy tena voajanahary Ho an'ny isan'andro isan'andro. Fanamarihana tsara ampiharina dia manasongadina ireo teboka stratejika manazava ny tarehy.
Apetaho amin'ny tendron'ny orona, ny andohalin'ny volomaso, ny takolaka ary raha maniry hazavana misimisy kokoa ianao dia afaka manampy fikasihana maivana eo afovoan'ny hodi-maso na eo amin'ny fihaonan'ilay fantson-dranomaso.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Maquillaje » Asehoy ny makiazy mba hiasa indray
Ny ratram-po nampatahotra azy mivady